” တရားထိုင်တာ နဲ့ ဘုရားစာရွတ်တာ ၊ ဥပုသ်စောင့်တာ ဘယ်ဟာ ပိုကောင်းလဲ …” – Na Pann San
Na Pann San W | June 22, 2020 | Knowledge | No Comments
မေး။ ။ အရှင်ဘုရား – တရားထိုင် လို့ရတဲ့ ကောင်းကျိုး နဲ့ ဘုရား စာရွတ်ဖတ်ပြီး ဘုရားရှိခိုးတာ ၊ ဥပုသ်စောင့် တဲ့ ကောင်းကျိုး နဲ့ ဘယ်ဟာက ပိုပြီး စိတ်ငြိမ်းချမ်း မှုကို ပိုရနိုင် ပါလဲ ဘုရား။
ဖြေ။ ။ ဘုန်းဘုန်း က အဲဒီလို မနှိုင်းယှဉ် တတ်ဘူး ။ နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ ကြည့် တဲ့ အလေ့အထ လုပ် မထားဘူး ။ ကိုယ့်ကိုယ် ကိုလည်းပဲ သူများ နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့ ဟာမျိုး မလုပ်ဘူးပေါ့။
ကျေးဇူးတော်ရှင် အောက်စဖို့ဒ် ဆရာတော် ဒေါက်တာဓမ္မသာမိ
အဲလို လုပ်မယ့် အစားcomplementary approach ဆိုတာ ဥပုသ်စောင့်တဲ့ဟာ နဲ့ တရားထိုင်တဲ့ဟာ ဘယ်လိုအပြန်အလှန် အကျိုးပြုတုန်း ဘုန်းဘုန်းက အဲလိုတွေးတယ် ။တစ်ခုစီ ဘုန်းဘုန်းက မတွေးဘူး ။
မဂ္ဂင် ၈-ပါးကို ဘုန်းဘုန်း ဒါလေး ဆွဲပြချင်တယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ အတွေးအခေါ်က ဒီထဲမှာ အကုန် ပါတယ် ။ ဒီ ဓမ္မစကြာထဲမှာ အကုန် ပါတယ်။
အဲဒီ စကြာက သူက အဲဒီ wheel လေ တစ်ခုတည်းပဲ ၊ဒါပေမဲ့ – အဲတစ်ခုတည်းကအရည်အသွေး ဘယ်နှစ်ခုကို integrate လုပ်ထားတုန်း ပေါင်းစပ်ထားတုန်းဆိုတော့၈ – ခု ပေါင်းစပ်ထား တယ်။
အဲတော့ သမီးက မေးတဲ့အထဲမှာ ဥပုသ်စောင့်တာ နဲ့ တရားထိုင်တာ ဘယ်ဟာက ပိုကောင်းလဲဆိုတာ ဘုန်းဘုန်း အဲလို မတွေးတာကဘုန်းဘုန်းက ဒီအတွေးတွေအတိုင်းကိုယ့်ကိုယ်ကို train လုပ်ထားလို့။
ဥပုသ်စောင့်တာ ကို အကန့် တစ်ကန့်လို့ ဘုန်းဘုန်းက ယူဆတယ်။ ဘုရား စာရွတ်တာကို အကန့်တကန့် လို့ ယူဆတယ် ။ တရား ထိုင်တာ ကို အကန့် တစ်ကန့် လို့ ယူဆထားတယ်။
အဲလို – အကန့်တွေ များလာရင်ကောင်း တဲ့ အကန့်တွေ များလာရင် …ဒီလူက သူဘာပဲ လုပ်လုပ်အကုန်လုံး အဲဒီအရည်အသွေးတွေက အချင်းချင်းဒီလို လက် ၅ – ချောင်းလို .. တချောင်း နဲ့ တချောင်း အထောက်အကူဖြစ် တယ်ပေါ့ ။
အဲတော့ – ဥပုသ်စောင့်တဲ့ လူကလည်းပဲ သူရဲ့ စိတ် ကို သူဆုံး မတာ ပါပဲ , train လုပ်တာပါပဲ ။ အစားအသောက် နဲ့ ပတ်သက်တာတွေ
နောက် music နဲ့ ပတ်သတ်တာတွေ အဲဒါ မျိုးတွေ သူ့စိတ် ကိုသူ train လုပ်တယ်Destruction တွေ မများအောင် ။ တရားထိုင်တဲ့ အခါလည်း ဒါပဲ လုပ်တာပဲ ။ စိတ်ထဲမှာ Destruction တွေ သိပ်ပြီးတော့ မများအောင် ကိုယ့်စိတ် ကို ထိန်းနိုင်အောင် လုပ်တာ ..
ဒါကြောင့် – ရည်ရွယ်ချက်ချင်း တူတယ် ။ ဒါကြောင့် ဘုန်းဘုန်း အနေနဲ့သမီးကို ဘယ်လို တွေးစေချင်းတုန်း ဆိုတော့ …ဘယ်ဟာက ပိုကောင်းတယ် ဆိုပြီးတော့ တွေးတာထက် … ဘယ်ဟာက ဘယ်ဟာနဲ့ သူတို့ အချင်းချင်း
အထောက်အကူ ဘယ်လိုဖြစ်သလဲ – အဲဒါတွေးစေချင်တယ် ။ အဲဒီ approach ကို အင်္ဂလိပ်လို Integral Approach.
အရင်တုန်းကလေ – မင်းတုန်းမင်းခေတ် တုန်းက ဒါနက ပိုအရေးကြီးတယ် တချို့ပြောတာ ..တချို့ကပြောတယ် မဟုတ်ဘူး။ သီလက ပိုအရေးကြီးတယ် .. တချို့က ပြောတယ်။တချို့က ဘာဝနာ ပိုအရေးကြီးတယ်။
ယောမင်းကြီး ဦးဖိုးလှိုင် က …
ဘာဝနာတစ်ခုပဲ အရေးကြီးတယ် ဆိုပြီးတော့ ..ဒါန နဲ့ သီလကို သူက ပယ်လိုက်တယ်။ အဲဒါကို – မဟာဝိသုဒ္ဓါရုံဆရာတော်ကြီးက ပြန်ပြီးတော့ရေးပြီး
မဟုတ်ဘူး ဒီသုံးခု ဘယ်လို အကျိုးပြုတယ်ဆိုတာ ပြန်ပြီး တော့ရေးတယ်။
ဆိုလိုတာက – ဗုဒ္ဓရဲ့အေတြးအေခ်ါက …
အရည် အသွေးတွေ အများကြီးရှိတဲ့နေရာမှာ အရည်အသွေးတစ်ခု နဲ့ တစ်ခု ပြိုင်အောင် မလုပ်ဘဲ နဲ့အဲဒီနည်းကို မရှာဘဲနဲ့ ….. အဲဒီ အရည်အသွေးတွေ အားလုံး စုပေါင်းပြီးတဲ့ အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ ဥပမာလေး တစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင် -လက်ငါးချောင်း သူတို့က ပြိုင်ကြတယ်တဲ့။
လက်မ – သူက နုလုံးသားနဲ့ အနီးဆုံးပဲတဲ့
ဒါကြောင့် သူက ပိုအရေးပါတယ်တဲ့။လက်ညှိုးက – အဲဒါ မခံချင်ဘူး။စကားများမနေနဲ့တဲ့ အမိန့်ပေးရင် ကျုပ်ကမှ အမိန့်ပေးတာ၊ ကျုပ်စကားပဲ နားထောင်တယ်။ လက်မနဲ့ ဒီလို သွားပြီးထိုး ဘယ်သူမှ နားမထောင်ဘူးတဲ့ ..သူက ပြောပြန်ရော။
ပြိုင်နေတာ အဲဒါကို ဒီလက်ခလယ်က အဲဒါကို ကြားပြီး တော့ အရမ်းကို အမြင်ကပ်တာနဲ့ သူလည်း ထပြီးတော့ ပြောတယ်တဲ့ ။ ငါ အရပ်အရှည်ဆုံးပါ ,အဲလိုပြောတော့ -နောက် တချောင်း လက်သူ ကြွယ် – တိတ်တိတ်နေစမ်းတဲ့ ရတနာရှိတယ်ဆိုရင် ငါကမှ စွပ်ရတာ ၊ ဘယ်သူမှ မစွပ်ရဘူး။ သူကမှ တန်ဖိုးရှိတာတဲ့။
အဲဒါကိုအငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ လက်သန်းလေး က – လုံးဝ မခံချင်ဘူး ..အေး – ဘုရားရှိခိုးရင် ငါ ရှေ့က နေရတယ်တဲ့။
အဲဒီလို မတွေးဘဲနဲ့ …
ဒီ. လက်ချောင်း စုပေါင်းပြီးတော့ ဆုပ်ရင် ဘယ်လို အားရှိတယ် ဒါလေးလက်ငါးချောင်းလုံး ကျောက်ခဲတစ်ခဲကို ကိုင်ပြီးတော့အတူတူ အဝေးကို လွှင့်ပစ်ပေါ့နော် …
စုပေါင်းအင်အား လုပ်ရင် ဘယ်လောက်ထိ ပစ်နိုင်တယ် ။ ဒါလေး ခေါင်းထဲမှာ ထည့်ထားဖို့ …။
လူကွီး လူငယျမရှေး ဒုက်ခပေးနတေဲ့ ဆီးခြိုရောဂါ အတှကျ အစှမျးထကျ တိုငျးရငျးဆေးနညျး
တန်ခူးလ မွေးဖွားသူများ အတွက် ကံကြမ္မာအဆိုးအကောင်း တစ်သက်တာ ဟောစာတမ်း…